२ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०२:५९ PM
‘ओलीको लम्पसार राष्ट्रवादबारे अब डा. रावलले नयाँ थेसिस लेख्लान् ’ : बाँस्कोटा
२८ पुष २०७७, मंगलवार १५:५० मा प्रकाशित
२०७७ पुस २८ मङ्गलबार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हालै एउटा भारतीय टेलिभिजन च्यानललाई हिन्दी भाषामा लामो अन्तर्वार्ता दिएका छन् । जिन्युजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले प्रचण्ड–माधव समूहका नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको समेत आलोचना गरेका छन् ।
प्रचण्ड अस्थिर भएकाले आफूले पटक–पटक धोका खाएको बताएका छन् ।
ओलीले हिन्दीमा अन्तर्वार्ता दिएको भन्दै धेरैले आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियता बिर्सिएर विस्तारवादीको भाषा बोलेको उनीहरुको भनाइ छ । यस्तो आरोप लगाउनेमा धेरैजसो प्रचण्ड–माधव पक्षको नेकपाका नेता र कार्यकर्ता छन् ।
पूर्वसूचना तथा सञ्चारप्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने ओलीको आलोचना गर्नेहरुमाथि कटाक्ष गरेका छन् । उनको कटाक्ष प्रचण्ड–माधव समूहका नेता डा. भीम रावलप्रति लक्षित छ ।
‘अब प्रम ओलीले दिन्दीमा बोल्नु गलत भो भनेर आन्दोलन गर्ने होलान् प्रचण्ड टोलीले’, उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘डा. रावलले नयाँ थेसिस लेख्लान् ओलीको लम्पसार राष्ट्रवादबारे । जनता त प्रम ठीक छन् भन्दैछन् ।’